Ikhamera ye-HD efihliweyo yeTixa yeThonsi yeKhamera (i-SPY156) | Izisombululo ze-OMG
Ikhamera ye-OMG Tissue Efihliweyo Ikhamera ye-HD HD (SPY156)
Le mveliso yenza ikhamera enkulu eNanny, igqibelele ukuhlolisisa ikhaya, ukuthintela ukweba, kunye nezinye izinto ezingasetyenziswayo.
Ikhamera inikwe amandla kwi-battery 2000mAh (iiyure ze-2 zexesha lokurekhoda).
Unokurekhoda ngelixa uhlawula.
Inombono wee-degrees ze-90 kunye nenkxaso ephezulu ye-32GB imemori khadi yangaphandle. Ividiyo igcina ngqo ekhadini le-SD elimfutshane.
Ungakwazi kwakhona ukurekhoda ngqo kwi-PC yakho usebenzisa njengekhamera ye-IP, okanye irekhoda ngqo kwifowuni yakho yeselula.
Iyakwazi ukujonga i-video ebukhoma ngekhompyutheni ye-PC kunye nomnxeba weselula.
Iza nekhebula le-USB elixhuma kwi-adapter yamandla.
Ingakwazi ukurekhoda ividiyo ngesisombululo se-1080P / 720P / 480P.
Uxhumano lwe-WiFi kunye noKuqonda kweMotion. Ungasetha umsebenzi wokufumanisa inkqubela kwi-APP, ukwenzela ukuba xa ufumanisa inkqubela, kuya kuthatha isithombe uze uchukumise umyalezo kwifowuni yakho.
Iyakwazi ukuxhasa i-Windows kunye ne-Mac OS X kwiikhomputha kunye ne-Android kunye ne-iOS yeefowuni zefowuni.
Le yikhamera yokhuseleko efanelekileyo kakhulu ekhethiweyo njengebhokisi leetyhuse.
Ifowuni isekela i-VLC kunye ne-SM Player software.
Isombululo seVidiyo: 1080P / 720P
Ireyithi yeSakhelo sevidiyo: 25fps - 30fps
Umda ongenawo umbane: <50m
I-lens angle: isidanga 90
Uhlobo loNxibelelwano: i-USB
Ixesha lokusebenza: Iiyure ze-3 kwibhetri eyakhelwe ngaphakathi
Unokusebenza ngexesha uhlawula
Ixesha lokuhlawula: iiyure 4
Lens: CMOS 1 / 4
Ixhasa i-32GB ye-Micro SD TF Memory Memory
Ukunikezwa Amandla: I-Adapter kunye ne-Li-Battery etshayiweyo
Inkxaso ye-OS: Windows, MAC, Android, i-iPhone
5674 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-7 Namhlanje